Ejipta: Fiantsoana Revolisiona Indray Taorian’ny Didim-Pitsarana Momba ny Raharaha Namonoana An’i Khaled Said · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2011 8:33 GMT
Voaheloka higadra fito taona any am-ponja ny polisy roa noho ny daroka niteraka ny fahafatesan'i Khaled Said, zatovolahy novonoina tany Alexandria nampirehitra ny revolisiona Ejipsiana. Tezitra ny mpisera amin'izay lazain-dry zareo fa didim-pitsarana mohaka sy tehamaina amin'ny revolisiona sy ny antsony isian'ny rariny.
Said, novonoina teo am-pelatanan'ny polisy tamin'ny Jona 2010, no lasa olomangan'ny revolisiona Ejipsiana. Niteraka tsy fahafaliana teo amin'ny tanora ejipsiana nandritra ny herinandro maromaro nialoha ny revolisiona ny nahitana ny sariny feno ratra izay lasa nalaza vetivety.
Niteraka antso ho amina revolisiona vaovao teo amin'ny samy tanora ao Ejipta indray ny nandrenesana ny didim-pitsarana.
Manontany ao amin'ny Twitter i Ahmed Aggour asks [ar]:
@Psypherize: Ka aiza moa ny gazety malalaka? Ary ny fitsarana mahaleo tena? Ary ny fitsarana ara-drariny? Ary ny fanadiovana ny Minisiteran'ny Atitany? Ary ny Fitandroam-pilaminan'ny Fanjakana?
Mikiaka ny The Big Pharaoh:
AHOANA? migadra 7 taona fotsiny ny mpamono an'i Khaled Said? Hafatra ho antsika izany: na ny mariky ny revolisiona aza dia tsy misy dikany intsony.
Manantena i Rania Samir [ar]:
@Rania1_: Manantena aho fa i Khaled Said no ho pitik'afo handrehitra ny revolisiona faharoa tahaka ny naha-izy no antony nahateraka ny voalohany
Nanampy i Tamer Fakahany:
Miampanga ny fanamelohana maivana tamin'ny fahafatesan'i Khaled Said ny mpikatroka Ejipsiana, nolazaina tsy hanifika ny kolikoly sy ny tsy rariny raiki-tapisaka ny revolisiona
Ary Baraka18 nanatsonga ny tenin'ny dadatoan'i Khaled Said hoe:
Ali Qassem (Dadatoan'i Khaled): “ny setrin'ny didim-pitsarnaa dia eny an'arabe fa tsy ao amin'ny efitranom-pitsarana
Mampahatsiahy antsika ny namoanoana an'i Said ny mpanao gazety ejipsiana Aya el Batrawy.
KhaledSaid no Mohammed Bouazizi an'i Ejipta. Maty i Said raha nisintona azy nivoaka ny cybercafe ny polisy manao fanamiana sivily 2 ary namono nahafaty azy.
Nilaza ny polisy fa ny fanafody maro nateliny no nanempotra azy, saingy ny fandidiam-paty no nitatitra fa nasesika ireo rehefa maty izy
Nanonona ny anaran'ny polisy tompon'nadraikitra tamin'ny fahafatesan'i Said i Ayman Farag:
Nihinana 7 taona i Mahmoud Salah Mahmoud sy i Awad Ismael Solimani, ireo polisy namono an'i Khaled Said
Maneso ny mpanao gazety Evan Hill:
Izany hoe mahazo mamono mahafaty ianao any Ejipta dia mihinana 7 taona. Aza “mamono” azy ireo fotsiny.
Tezitra i Sarrah Abdelrahman:
Tsia! tsy hanaiky io aho hahakivy ahy. Fa avelako HAHATEZITRA ahy! Fotoanan'ny revolisiona ! Lazao any amin'ny ya 3askar (miaramila)
Miantso fiovana ny mpamaham-bolongana Amr Gharbeia [ar]:
@gharbeia: Ny zon'i Khaled Said tsy hoe fiampangana ny anankiroa ho namono azy. Ny zony dia mba tsy hisy intsony mandrakizay ny famonoan'olona tahaka ireny, ary miova ny rafi-pitsarana manontolo
Ary toy ny mandrabiraby ilay Ejipsiana Abo Ghal [ar]:
@AboGahl1: Taorian'ity didim-pitsarana mahafinaritra ity, mila miomana isika ain'izay hatao rehefa ambara ho tsy meloka ireto mbola voafonja manaraka ireto Hosni Mubarak, Jamal Mubarak, Alaa Mubarak, Safwat Al Shareef ary i Nazeef.
Mananihany i Hana Zuhair:
Raha mitohy izao, hahazo vola ho sandan'ny fanelingelenana tamin'ny torimasony avy amin'ireo mpibata azy nankany amin'ny Fitsarana i Mubarak